महासंघमा शुद्धिकरण र सुदृढिकरणका लागि मेरो उम्मेदवारीः डाक्टर तिलचन्द्र भट्टराई « Pahilo News
महासंघमा शुद्धिकरण र सुदृढिकरणका लागि मेरो उम्मेदवारीः डाक्टर तिलचन्द्र भट्टराई
प्रकाशित मिति :4April, 2017 8:55 pm
डाक्टर तिलचन्द्र भट्टराई उद्योग बाणिज्य संघ चितवनका पूर्वअध्यक्ष हुन् । नेपाल दाना उद्योगको निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वस्तुगतर्फ केन्द्र्रीय सदस्य उम्मेदवार बनेका छन् । महासंघको ५१औँ साधारणसभा यही २८ चैतमा हुँदैछ । नयाँ नेतृत्व चयनका लागि हुन लागेको सो साधारणसभामा ६४ पदका लागि १ सय १२ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । १ सय १२ उम्मेदवार मध्ये भट्टराई एक्ला डाक्टर पनि हुन् । आफ्नो क्षेत्रमा निकै राम्रो दख्खल राख्ने भट्टराईसँग पहिलो न्युज डटकमले गरेको कुराकानीः
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा तपाईँको उम्मेदवारी किन ?
विगत २० बर्षदेखि म चेम्बर आन्दोलनमा सक्रिय छु । चितवनमा मैले साधारण सदस्यदेखि अध्यक्ष सम्मका सबै पदमा बसेर जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव छ । मलाई अहिले पनि सम्झना छ, चितवन उद्योग बाणिज्य महासंघको अध्यक्ष रहेको वेला २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन चलिरहेको थियो त्यो बेला पनि मैले सफल ढंगले नेतृत्व गरेको थिएँ । म पेशाले भेटनरी डाक्टर हुँ । म यही क्षेत्रमा भएको हुनाले मैले यो क्षेत्रमा निकै लामो अनुभव बटुलेको छु । मेरो आफ्नै प्रोफेसन’को क्षेत्रमा बढी काम गर्दै आएको छु । मेरै अगुवाई स्थापना भएको नेपाल दाना उद्योग संघ अहिले निकै चर्चामा छ । २०४८ सालदेखि म त्यो संघमा आवद्ध थिएँ । त्यो संघमा जिल्ला हुँदै केन्द्रको समेत जिम्मेवारी २ कार्यकाल गरिसकेको छु । अब नीति–निर्माण र नेतृत्व तहमा पनि बसेर काम गर्नुपर्छ भनेर मैले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघमा बस्तुगत तर्फको सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
उद्योग बाणिज्य माहासंघमा ब्यवसायिक भन्दा पनि राजनीतिक बढीे हावी भएको छ भन्ने आरोप छ, यो आरोपबारे के भन्नुहुन्छ ?
उद्योग बाणिज्य माहासंघ व्यवसायीहरुको छाता संगठन हो । यो कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन होइन । त्यसैले महासंघमा राजनीतिकरण गर्नुहुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ । देशको समवृद्धिको खाका कोर्ने जिम्मेवारी महासंघको काँधमा छ । त्यसैले महासंघमा बसेर बढी राजनीति गर्ने हो भने त्यो उचित हुन्न । केही हदसम्म महासंघ राजनीतिकरण पनि भएको छ । आगामी दिनमा त्यसलाई अझ सुद्धिकरण गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । सबै राजनीतिक दलका घोषणपत्रलाई अध्ययन गर्ने हो भने सबैले आफ्नो घोषणपत्रमा मुलुकलाई सम्वृद्धिको दिशामा अघि बढाउने समतामुलुक देश निर्माण गर्ने कुरालाई नै जोड दिएका छन् । त्यसो भएको हुनाले अब नीजि क्षेत्रको पहलकदमी पनि त्यसैतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । समतामुलुक र सम्वृद्धिको दिशामा देशलाई अघि बढाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । हाम्रो पहल पनि त्यसैतर्फ केन्द्रित हुनेछ ।
तपाईँ नेतृत्वमा गएपछि महासंघ यस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने ‘भिजन’ पनि त होला नि ?
निश्चय पनि महासंघको संगठन सुदृढ, सक्रिय तथा व्यवस्थापन चुस्त र पेशागत हकहितमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सबै प्रकारका सदस्यहरुको महासंघभित्र समान र न्यायोचित पहुँच र प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ । हामी यी मान्यतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अघि बढ्ने छौँ । मेरो पहल पनि त्यसैमा केन्द्रित हुनेछ । त्योसँगै महासंघको संस्थागत संरचनालाई समयानुकुल, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन के गर्नु आवश्यक छ भन्ने दृष्टिकोषका साथ विषयविज्ञहरुको टोली बनाएर अध्ययन÷ अनुसन्धान गराउँने पहल पनि हामी नेतृत्वमा पुगेको अवस्थामा गर्ने छौँ । सुदृढ संगठनका लागि सक्षम नेतृत्व आवश्यक पर्ने हुनाले महासंघका सबै सदस्य क्षेत्रहरुमा सरकार तथा अन्तराष्ट्रि सहयोगी संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा नेतृत्व विकासका विशेष कार्यक्रमहरु लागु गर्ने–गराउने कुरामा पनि महासंघको जोड रहने छ । महासंघ भित्र सबै वर्गका सदस्यहरुले आफू सम्मानित सदस्य भएको र सबै सदस्य वरावर हुन् भन्ने महसुस गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि हामी पहल गर्ने छौँ ।
अहिले निर्वाचनमा दुई समूहले आ–आफ्नो प्यानल खडा गरेर निर्वाचन लड्दै छन्, तपाईँहरुको टिम कस्तो छ ?
हामीले हाम्रो टिममा वस्तुगत तर्फका ५ वटै क्षेत्रलाई समेटेर तयार पारेका छौ । आर्थिक रूपमा जसको जति लगानी छ ‘सेक्टर’ अनुसार प्रतिनिधित्व हुने गरी हाम्रो टिम बनाएका छौँ । टिममा रहेका सबै साथीहरू व्यवसायी रूपमा दक्ष र योग्य हुनुहुन्छ । समग्रममा भन्दा हाम्रो टिक महासंघ हाक्न सक्ने क्षमता भएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा हाम्रो टिमबाट किशोर प्रधान हुनुहुन्छ । जिल्ला नगरको उापाध्यक्षमा प्रमोद श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । वस्तुगतको उपाध्यक्षमा शङकर पाण्डे हुनुन्छ । उहाँहरूको नेतृत्वमा हाम्रो १४ जना वस्तुगत सदस्यहरूको टिम रहेको छ । मलाई आशा छ, यो टिम भारी मतसहित विजयी हुनेछ । सबै विवेकशील मतदाताले विवेक प्रयोग गर्नुहुनेछ ।
यो टिमले राजनीतिक दलका आधारमा कुनै पनि उद्योगमा युनियन बन्नु हुँदैन भन्ने मान्यता अघि सारेको छ । मजदुरहरुको हकहितमा काम गर्ने हो भने राजनीतिक दलको झण्डा भन्दा बाहिरका व्यक्तिहरुको संलग्नतामा युनियन बन्नुपर्छ । मैले मेरा उद्योगमा पनि यही गरेको छु । म महासंघको कार्यसमितिमा पुगेपछि यी कुरालाई गम्भीर रुपमा उठाउने छु ।
नेतृत्वमा आउन विभिन्न खालका चलखेल गर्ने रोग महासंघमा छ भन्निछ, यसको सुद्धिकरण कत्तिको देख्नुभएको छ ?
म व्यक्तिगतरुमा कसैलाई पनि आक्षेप लगाउने पक्षमा छैन । तपाईँले भनेका कुरामा केही सत्यता छ । यही ढंगले अघि बढ्ने हो भने महासंघको गरिमा नरहन सक्छ । महासंघ निकै अप्ठयारो अवस्थामा गठन भएको संस्था हो । यसको गरिमालाई बचाई राख्न पनि हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । मलाई लाग्छ यहाँका व्यवसायी देश एकातिर गए केही फरक पर्दैन हामी अर्कैतिर जान्छौँ भन्ने पक्षमा छैनन् । हामीले राष्ट्रियताका आधारमा व्यवसायलाई अघि बढाउनुपर्छ । हामी एकजनाले मात्र कमाएर हुँदैन । देश सम्वृद्ध बन्नुपर्छ । हामीले यही सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ । अहिलेको टीम यही आधारमा अघि बढेको छ ।
मैले अघि पनि भने, म २० वर्षदेखि कृषि उद्योगमा संलग्न व्यक्ति हुँ । मैले अनुभवका आधारमा पनि यो क्षेत्रमा विज्ञता प्राप्त गरेको छु । मैले करिब १४ सयलाई रोजागरी दिएको छ । मेरो अनुभव समग्र देशको कृषि उद्योगका लागि हुनेछ । अहिले महासंघमा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । म कार्यसमितिमा आएको अवस्थामा यी कुरामा ध्यान दिनेछु । मसँग गफ गर्ने मात्र होइन, परिवर्तन गरेर लैजाने ‘भिजन’ पनि छ । यो मेरो दोस्रो आधार हो । बस्तुगत संघलाई बलियो बनाउन विधान संशोधन गर्ने जस्ता कुरामा पनि म कार्यसमितिमा आएको अवस्थामा गर्ने छु । राज्यले सहजीकरण गर्ने हो, काम उद्योगीहरुले गर्ने हो । देशलाई सम्वृद्धिको दिशामा लैजान उद्योगी व्यव्यवसायीहरु एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ । म यो कुरालाई गम्भीर रुपमा लिएर अघि बढ्ने छु ।
मेरो टिमको कुरा गर्नुहुन्छ भने महासंघको नेतृत्व गरेको अवस्थामा नीजि क्षेत्रको हितमा काम गर्नु पहिलो उद्देश्य हुनेछ । महासंघलाई अझ बलियो बनाउने, व्यवस्थापन सुदृढ बनाउने, सरकारसँग नीति निर्माणमा हातेमालो गरेर काम गर्ने यी पनि हाम्रो टिमका प्रमुख काम हुनेछन् । उद्योगी व्यवसायीहरुको सम्मान र हक हितको रक्षा गर्ने, उद्योगी–व्यवसायी र लगानीकर्ताहरुको मनोवल बढाउने, महासंघको सार्वजनिक प्रतिष्ठा उच्च पार्ने, महासंघलाई आर्थिक उन्नतिको सशक्त सम्वाह बनाउँने कार्यमा पनि हाम्रो टिक लाग्ने छ ।
सांगठनिक सुदृढिकरण, प्रदेश, जिल्ला–नगर, वस्तुगत तथा द्विराष्ट्रिय सदस्यहरुको क्षमता वृद्धि गर्ने, संस्थागत सुदृढकरणको पहल गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिने, कृषिको व्यवसायीकरणमा नीजि क्षेत्रको संलग्नता बढाउने, साना तथा मझौला उद्योगको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम, रोजगारमुलक उद्योग व्यवसायको विकास तथा विस्तारलाई प्राथमिकता दिने जस्ता कुरामा पनि हाम्रो पहल रहने छ । राष्ट्रिय– अन्र्तराष्ट्रिय सम्वन्धको विस्तार, निजी क्षेत्र विकास अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्ने लगाएतका एजेन्डालाई पनि हामीले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छौँ ।
कृषिको व्यवसायीकरणमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउने, विगतमा मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई पुनर्जागृत गराई व्यवसायिक कृषिलाई अगाढी बढाउन निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउनेतर्फ पनि ठोस पहल गरिनेछ । करार खेती, व्यवसायीक खेती, कृषिजन्य उद्योग प्रवद्र्धन, दुग्ध पदार्थ, मासु, खाद्यान्न फलफूल तथा नगदेवालीहरुको उत्पादन वृद्धि तथा निर्यात प्रवर्धन जस्ता कुराहरुलाई सरकारी प्राथमिकतामा पार्न पहल गरिनेछ । कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण तथा कृषिमा आधारित निर्यातमुखी उद्योगहरुको विकासका लागि सरकारसंग र अन्र्रा्ष्ट्रिय संस्थासंग ठोस सहकार्यको सुरुवात गरिनेछ ।